Mufaro Wangu Manifesto | Martech Zone
Rufaro Rwangu Manifesto
Chishanu, Mbudzi 24, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Hugh MacLeod paGapingVoid.com anga aine yakanaka posvo nhasi achibvunza vanhu avo 'manifesto'. Kutenda kwakandikurudzira kunyora zvangu pamufaro. Hezvino zvandakanyora uye izvo zvakatumirwa naHugh (nemaviri edhi girama uye mufananidzo wakanaka waHugh!):
Tsika yedu yakazara nemishumo inotitungamira munzira yekuzviparadza. Mufaro wakaenzana nezvinhu zvatisina… mota, mari, 6-pack abs, mibairo, mararamiro, kana kunyangwe soda. Ruzivo rwakaenzana nehupfumi, kunyangwe uchiunganidza kana kugarwa nhaka. Ichi ndicho chirwere chetsika nemagariro edu, chinotivimbisa kuti hatina kungwara zvakakwana, hatina kupfuma zvakakwana, hatina kukwana.
Vezvenhau vanotivaraidza nenyaya dzehupfumi, bonde, mhosva, uye simba - zvinhu zvese zvinhu zvingatirwadzisa isu kana vamwe kana zvatorwa zvakawandisa. Hurumende yedu inototora chikamu mukutadza kutungamira, ichitinakidza nerotari. Meseji yekutengesa yega yega uye yega yekutengesa yakafanana, "Uchafara kana".
Hatisi kufara nevakaroora vedu, saka tinorambana. Hatisi kufara nedzimba dzedu, saka tinotamisa mhuri dzedu uye titenge dzakakura kudzamara tisingakwanise kudzipa. Tinotenga kudzamara kiredhiti kwedu kapera uye tobva tapunzika. Hatisi kufara nemabasa edu, saka tinopinda mune zvematongerwo enyika zvinokuvadza kuedza kukurumidza kushambadzira. Hatisi kufara nevashandi vedu saka tinotsvaga vatsva. Hatisi kufara nezvatinowana, saka tinorega vashandi vakatendeka vaende.
Tiri tsika dzevanhu vakaudzwa kuti kurira ndiyo nzira yakanakisa yemufaro. Huswa hunogara hwakasvibira - musikana anotevera, imba inotevera, guta rinotevera, basa rinotevera, chinwiwa chinotevera, sarudzo inotevera, inotevera, inotevera, inotevera… Hatina kumbodzidziswa kufara nezvatinazvo izvozvi. Tinofanira kuva nayo, uye kuva nayo izvozvi. Ndipo patichazofara.
Sezvo zvichingoita kune vashoma vakasarudzwa kuti vave nazvo zvese, bhawa rinogara rakakwira kupfuura ratingawana. Hatife takawana mufaro sekutsanangurwa kwetsika nemagariro edu. Tinotsungirira sei? Isu mishonga. Zvinodhaka zvisiri pamutemo, doro, mishonga yekunwa, fodya zvese zvinodiwa uye zvakakurumbira sezvo zvichitora hupenyu hwedu husina kuzadzikiswa.
Muchokwadi, isu tiri pamusoro penyika. Isu tiri vatungamiriri vane chese chinhu chebudiriro icho tsika dzinoyerwa kupokana nacho. Isu tine mauto ane simba kwazvo, akanakisa zviwanikwa zviwanikwa, hupfumi hukuru, uye vanhu vanoshamisa kwazvo.
Asi, hatisi kufara.
Usavimbe nemumwe munhu kana chero chinhu kunze kwako kuti utyaire mufaro wako. Zviri kune mumwe kunze kwako. Kana iwe uine yako mufaro hapana anogona kuiba, hapana munhu anogona kuitenga, uye haufanire kutsvaga kune imwe nzvimbo kuti uiwane. Asi iwe unogona kupa imwe chero nguva yaungade!
Mwari vakuropafadze iwe uye neyako ino yakanaka Kutenda! Nguva yekutenda izuva rimwe chete pagore. Zvichida isu tinofanirwa kuve ne "Kuzvipa" uye kudzoreredza karenda yedu. Ngatipedzei zvakasara zvegore tichifara nezvatinazvo uye rimwe zuva tichizvikanganisa nezvatisina. Ngatifarei nemhuri yedu, vana vedu, imba yedu, basa redu, nyika yedu uye nehupenyu hwedu.
Uchave unofara… kana iwe ukawana mufaro mukati mako.
Kubatsira Martin Luther King, Jr kuburikidza neSeO? Geeks inodzosera kumashure!
Zvita 22, 2006 na10:32 PM
"Zviuru zvemakenduru zvinogona kuvhenekerwa kubva kune rimwe kenduru, uye hupenyu hwekenduru hauzopfupiki. Mufaro haumboperi nokugoverwa.â?